थाकस एक दुई जना व्यक्तिको कठपुतली बनेको छ : राजकुमार लेखी – Tharuwan.com
प्रकाशित : २०७७ चैत ५ गते १६:०३
यही मौका पारेर जसपाले रेशम चौधरीलगागयत टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई रिहाइ गर्न प्रमुख सर्त अघि सारेको छ। यस विषयमा छलफल गर्न सरकार र जसपा स्वयंले कार्यदल पनि बनाएको छ। यही विषयमा उपर हामीले जसपाका केन्द्री कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखी प्रश्न गरेका छौं।
रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
वर्तमान नेतृत्वले समय सापेक्ष माग मुद्दा बोकेर गाउँ-गाउँमा जानु पर्थ्यो, थारु भएको ठाउँमा जानुपर्थ्यो। मलाई लाग्छ, विधानअनुसार संस्था चल्न सकेको छैन। एक दुई जना ब्यक्तिहरुको कठपुतलीको रुपमा थाकस रहेको छ। ०७२ सालदेखि एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेको छ। यसबीचमा चार जना बालुवाटार गएर फोटो खिचाउनुबाहेक कुनै काम गरेको देख्दिनँ।
अहिले केपी ओलीको सरकार छ। तर जतिबेला थरुहट आन्दोलन थियो, जति बेला मधेस आन्दोलन थियो, जतिबेला टीकापुर घटना घट्यो। त्यतिबेला कसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो? सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको थियो। त्यही भएर हाम्रा निम्ति सबै बराबर हुन्।